Shirka hogaamiyaasha Midowga Africa oo looga hadlayo dagaalka Al-shabaab | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Shirka hogaamiyaasha Midowga Africa oo looga hadlayo dagaalka Al-shabaab
Shirka hogaamiyaasha Midowga Africa oo looga hadlayo dagaalka Al-shabaab
Hogaamiyaasha Africa ayaa ku sii qul qulaya magaalo madaxda dalka Ethiopia ee Adis-ababa,halkaasi oo ay ku leeyihiin shirka sanadlaha ah ee 26-aad,kaasi oo diirada lagu saari doono arimo badan oo quseeya xaalada dalalka Africa.
Inta la ogtahay shirka ayaa hada si gaar ah diirada loogu saari doona ilaa iyo shan qodob oo ay ka mid tahay dagaalka lagula jiro Al-shabaab,iyadoo si gaar ah loo eegi doono weerarkii Ceel-cadde oo askar badan oo Kenyan ah lagu dilay.
Amniga Gobolka waa qodobka ugu muhiim ah oo hogaamiyasha Midowga Africa si weyn u gorfeyn doonaan,waxaana shirka hogaamiyaasha ka soo qeyb galaya ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Masar Abdel Fattah el-Sisi, oo si gaar ah kulanka guud ka dib isku arki doona.
Al-shabaab ayaa 15-kii bishan weerar xoogan ku qaaday fariisin ciidanka Midowga Africa ee AMISOM ku lahaayeen deegaanka Ceel-cadde ee Gobolka Gedo,waxayna halkaasi ku dileen sida ay sheegteen in ka badan 100-askari oo Kenyan ah,inkastoo Dowladda Kenya ay ka gaabsatay iney faah faahin ka bixisay tirada saxda ee weerarkaasi looga dilay.
Sidoo kale,shirka hogaamiyaasha Midowga Africa ee Adis-ababa oo mudo labo maalmood ah socon doona ayaa waxaa arimaha kale ee looga hadlayo ka mid ah Xalinta qalalaasaha ka taagan Burundi,xoojinta mlaitariga Galbeedka Africa, xaqiijinta nabad galyada KMG ee Libya iyo dhismaha Mustaqbalka ee Koonfurta Suudaan.
Previous PostSacuudiga oo fursado shaqo u soo bandhigay shaqalaha somaliyeed Next PostRa’iisul Wasaaraha dalka oo maanta ku wajahan Puntland